भाइरल भिडियोको अन्तर्य
डर्टमुण्डलाई हराउँदै लिभरकुसेन दोस्रो स्थानमा
चेल्सीलाई हराउँदै लेइस्टर शीर्ष स्थानमा
मुख्य पृष्ठकन्टिर-दृष्टिभाइरल भिडियोको अन्तर्य
सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडियो भाइरल भएको देख्दा कन्टिर–बाबू चकित छन् । राजनीतिमा घृणा कति साह्रो मिसिएको ? उदेकलाग्दो अवस्था पो छ त ।
नेपाली राजनीति असहिष्णु बन्दै गएको उदाहरणका रूपमा कन्टिर–बाबूले त्यो भिडियोलाई लिएका छन् ।
स्याङ्जाको त्यो भिडियोमा एक जना मन्त्रीको गाडी पछि–पछि केही व्यक्ति दगुरेको देखिन्छ । स्थानीयले मन्त्रीलाई लखेटेको भन्दै काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताले त्यो भिडियो भाइरल बनाएछन् ।
कन्टिर–बाबूले स्याङ्जामै सम्पर्क गरेर बुझ्ने प्रयत्न गर्दा भिडियोमा भनिएजस्तै सबै कुरा ‘सही’ नभएको जनाउ पाएछन् ।
विचरा ती मन्त्रीले के गरुन् ? नेपालको नयाँ नक्सा छापेर वाहवाही लुट्ने जस्तो सजिलो काम थिएन, स्याङजा पुगेर ‘ओल्बा’ छाप कमनिस्टलाई प्रशिक्षण दिने कार्य । अझ काङ्ग्रेसले विरोधसभाको आयोजना गरेकै दिन ।
कन्टिर–बाबूको प्रश्न छ– हैन, काङ्ग्रेसीको विरोध कार्यक्रम छ भन्ने थाहा पाउँदा–पाउँदै ओल्बाको नाममा ती मन्त्री सरकारी स्रोत–साधन दुरूपयोग गर्दै काङ्ग्रेसीसँग ‘जुध्न’ किन जानु भन्या ? यो त राजनीतिक असहिष्णुता हो नि ।
हुन त ती मन्त्री मूलबाटो छोडेर करिडोरको बाटो लागेको अरूले पनि देख्या हुन् । तर एउटा कुरो नि, संयम त मन्त्रीबाट पनि गुम्यो । तिनले काङ्ग्रेसकै कार्यक्रम भएका दिन प्रशिक्षण कार्यक्रम राखेर आफ्नो प्रभावको तुजुक देखाउने प्रयास किन गर्नु ?
समस्या बेहोर्नैपर्ने थियो त । सायद तिनमा चुनाव जित्दाताकाको पुरानो धङधङी बाँकी रहेछ– सब स्याङ्जाली मेरै हुन् भन्ने ।
कन्टिर–बाबू भन्छन्– समय सधैँ एकनासे कहाँ हुन्छ मन्त्रीजी ? आँधीखोलामा कति पानी बगिसक्यो भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा भएन कि जानी–जानी बुझ पचाउनुभएको हो ?
पानी, रवाफ र प्रभाव सधैँ एकै ठाउँ रहिरहँदैन भन्ने सदैव हेक्का राखैँ है, भाइरल भिडियोमा देखिएका खेदिने र खेदाउने दुवैले … बाँकी अरूले पनि !
प्रशिक्षण भाइरल भिडियो स्याङजा
भाइरल फोटोमा परपीडक बिम्ब
हाय रे मधेस ! हाय रे सत्ता ! हाय रे सहिद !
ओझेलमा एउटा नेपाली उपलब्धि
सर्वविदित न्यायिक घाउमा खिल पल्टिने सम्भावना